Ny anjara Apple TV + dia 3% rehefa afaka 2 taona | Avy amin'ny mac aho
Toy ny tsingerintaona faharoan'ny Apple TV +, ny tarehimarika fizarana tsena vaovao zarain'ny JustWatch dia mametraka izany lavitra any ambadiky ny Netflix, Amazon Prime Video ary Disney +. Raha ny tarehimarika avy amin'ny JustWatch, ny Apple TV + dia manana anjaran-tsena 3% fotsiny.
Sary namboarin'ny toerana JustWatch Ny Netflix dia mitana ny laharana 28% fizarana tsena amin'ny telovolana faharoa 2021. Ny Amazon Prime Video dia mitana ny laharana faharoa, miaraka amin'ny 20%, raha Disney + kosa manana 14%. Avy any no ahitantsika ny HBO Max miaraka amin'ny 9%, Peacok (NBCUniversal) miaraka amin'ny 4% ary Apple TV + dia manidy ny laharana amin'ny fizarana tsena 3%.
Na dia nokapohin'ny Apple TV + aza ny lohany tamin'ny andian-dahatsoratra toa an'i Ted Lasso, izay nahazo loka marobe, na eo aza izany dia sehatra iray toa miady izy mitady toerana eto amin'izao tontolo izao izay anjakan'ny telo lehibe hatreto. Na dia vaovao eo amin'ny tsena aza i Disney +, ny haben'ny katalaoginy sy ireo fananana mahavariana dia midika fa nalaza foana izy io.
Paikadin'i Apple an'ny ny fianteherana amin'ny famokarana azy irery ihany no mampidi-doza. Na eo aza ny zava-misy nandritra ny famelabelarana dia nanambara izy fa ny Apple TV + dia miavaka amin'ny kalitao fa tsy ny habetsahana, ny tena zava-misy dia samy hafa be tokoa.
Tsy misy mandà fa ny kalitaon'ny andian-dahatsoratra hita ao amin'ny Apple TV + dia tsara, na izany aza, afa-tsy ny an'i Ted Lasso tsy nisy na dia iray aza tamin'ireo famokarana lehibe izay natokan'ny Apple hatramin'ny andro voalohany (The Show maraina, ho an'ny olombelona rehetra sy mahita), dia nijinja ny loka nantenain'i Apple.
Ohatra iray amin'ny maha-zava-dehibe ny tahiry katalaogy dia hita ao amin'ny Disney +, sehatra iray izay nahatratra ny tsena andro vitsivitsy taorian'ny Apple TV + nefa efa nihoatra ny mpanjifa 100 tapitrisa, mazàna. noho ny mombamomba azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny anjara Apple TV + dia 3% raha efa ho 2 taona izao
Ny Thunderbolt 5 dia mety hahatratra ny hafainganam-pandeha 80 GB isan-tsegondra